नेपालका चर्चित ९ नारी » Enavanari
नेपालका चर्चित ९ नारी
महिला भन्ने वितिकै हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण फरक रहदै आयो । महिला र पुरुष बीचको बिशाल खाडलले महिलालाई अगाडि बढ्नको लागि सधै रोक्ने प्रयास गरि नै रहयो । जति पुरुष प्रति समाज उदार बन्यो त्यति नै महिला प्रति उनुदार बन्यो । जसको फलस्वरुप महिलाले पुरुषसरह शिक्षा, कामको सवतन्त्रता केहि पनि पाउन सकेनन् । तर त्यसका बाबजुत पनि महिला कहिल्यै पछि हटेनन् यी सब समस्यालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने कोशिश गरिरहे र सफल पनि भएका छन् । समय अनुकुल र परिस्थितिअनुसार महिलाले आफुलाई काली, शक्ति स्वरुपा तथा अन्य देवीको रुप धारण गरेका हुन्छन् । नारीका यहि बिभिन्न रुपका कारण समाज व्यास्थित र अनुशासित हुन सकेको छ। दशै स्पेशल यस अंकमा केहि सफल नारीशक्ति हरुलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।
निडर महिला नेतृ
भोजपुरबाट विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएकी विद्या देवी भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन् । उनी दुई पटक सम्म राष्ट्रपति बन्न सफल महिला हुन् । जननेता मदन भण्डारीकी श्रीमती समेत रहेकी उनी २०५० सालको चुनावमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर संसदीय राजनीतिमा होमिएकी थिईन् । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल उनी एक उदारणीय व्यक्तित्वहुन् । वातावरण मन्त्री, रक्षा मन्त्री हुदैँ नेपालकै अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने पद राष्ट्रपति बन्न सफल भएकी उनी राजनीतिमा मात्र नभएर पारिवारिक जीवनमा समेत सफल रहिन् । यसो त पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल उनले आफ्नो कार्यकाल सफलता पूर्वक पूरा गरिन् । हाल दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेकी छन् । माने भन्ज्याङ् भोजपुरमा जन्मिएकी भण्डारी एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियुबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिईन् ।
बोहरेश्वर प्राथमिक विद्यालय भोजपुरबाट प्राथमिक शिक्षाको शुरुवात गरेकी उनले भोजपुर बाटै एस.एल.सी उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । भोजपुर क्याम्पसमा आइ.ए.अध्ययनको थालनी सगै वि.सं.२०३५ देखि नेकपा मालेका युवा लिगमा संगठित हुदै विद्याले राजनीतिक जीवनको थालनी गरेकी थिइन् । भूमिगत अवस्थामा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनी आफ्ना श्रीमान्को जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि राजनीतिमा पुनः सक्रिय भएकी हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट संसद सम्म पुग्न सफल भण्डारी नेपालमा गणतन्त्र आए पछिको दोश्रो अनि तेश्रो राष्ट्रपति हुन् । स्थानीय चुनाव, प्रतिनिधि तथा प्रदेश निर्वाचन पछि तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलामा चौतर्फी विरोध नभएको भने होइन तर समय, योग्यता र कार्यक्षमताले गर्दा दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने अवसर उनैको पोल्टोमा आयो । उग्र रुपमा राजनीतिक जीवनको चर्चा भएता पनि भण्डारी सफल, अब्बल महिला तथा राजनीतिज्ञको रुपमा समाज र राष्ट्रमा परिचित छिन् ।
आफ्नो उर्वर समय राजनीतिमा विताएकी उनले परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्न सक्ने निडर नेताको रुपमा आफ्नो छवि बनाइन् । राजनीति तथा महिलाहरु सेवामूलक कार्यमा संलग्न भएमा बिग्रन्छन्, महिलाहरु आरक्षणमा मात्र सिमित रहनु पर्छ, महिलाले नेतृत्व लिन सक्दैनन् भन्ने धारणालाई पछि पार्न सफल उनलाई धेरै महिलाहरुले आफ्नो आइडलको रुपमा लिने गरेका छन् । गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु पूर्व उनी एक राजनीतिज्ञ तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष समेत थिइन् । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा विषेश योगदान समेत पु¥याउदै आएकी उनी पुरुषप्रधान समाजका लागि हठ सोच भएकी व्यक्ति हुन् । महिला अधिकारका लागि लडेर देशको बागडोर सम्हाल्न सफल व्याक्तित्व हुन् ।
समाजसेवासँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय
सामाजिक क्षेत्रमा सफल अनुराधा कोइरालाको जन्म ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जाटारमा गुरुङ परिवारमा भएको हो । उनका बाबु कर्णेल प्रताप सिंह गुरुङ र आमा लक्ष्मी गुरुङ हुन् । उनी सानै देखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न रुचि राख्थिन् । विशेषगरी विभिन्न देशमा विभिन्न माध्यमबाट नेपाली चेलीबेटी बेचिदै आएको र सकेसम्म बेच्न नदिने र बेचिएका चेलीलाई उद्धार गर्ने कार्य गर्दै आएको संस्था माइती नेपालको संस्थापक हुन् उनी । सिएनए हिरो अवार्ड पाउन सफल उनी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा समेत सक्रिय रहेकी छन् ।
माइती नेपालमा प्रवेश गर्नु पूर्व गौशला बसाई भएकी अनुराधा पशुपतिको नियमित दर्शन गर्ने गर्थिन् । सोही क्रममा पशुपति परिसर बाहिर बाटोमा बच्चा अगाडि राखेर भिक्षा माग्नेहरू प्रशस्त देखा पर्थे, उनलाई त्यो दृष्य देख्दा मनमा प्रश्न उब्जन्थ्यो । यसरी दिनभरी सडकमा मागेर राति आकाशको ओत लाग्नेहरू यौनजन्य हिंसाबाट टाढा रहन सक्लान त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा एक मगन्ते महिलासँगको वार्तालापबाट थाहा भयो उनको शंका ठीक रहेछ । यौनजन्य हिंसाबाट मुक्त गर्न उनले भेटिएकामध्ये नौ जनालाई सहयोगस्वरूप कोठा लिन तथा नाङ्लो पसल थाप्न प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैंयाँका दरले उपलब्ध गराएर उनले समाजसेवाको बाटो प्रारम्भ गरेकी थिईन् ।
महिलाको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर त्यसपछि उनले आफ्नो बचत रकमको केही हिस्सा जोगाउन थालिन् र आँफूले लगानी गरेर पसल सुरु गरेका महिलाहरुबाट पनि प्रतिदिन २ रुपैया उठाउन थालिन् । उक्त रकमबाट १० जना बालबालिकालाई सहयोग गर्न थालिन् । तलबले तिनलाई ख्वाउन पुग्ला भन्ने आशा राखेकी अनुराधामा ऋण थपिँदै गएको थियो । यसै बीचमा उनलाई क्षयरोगले समात्यो तर पनि उपचारपछि मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा फैलिएको चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध चेतना फैलाउने उद्देश्य छाडिनन् । पद्मकन्याका विद्यार्थी र प्रहरीलाई साथमा लिई बेचबिखनको मुख्य स्थान भनेर चिनिएका स्थानहरुमा घुम्न थालिन् । यसरी उनी सन् १९९३ मा स्थापना भएको माइती नेपालको संस्थापकको रुपमा काम गर्न थालिन् ।
१० कक्षासम्म भारतको कालिम्पोङमा अध्ययन गरेकी उनले भारतकै कोलकाताबाट बि.ए. पास गरेकी हुन् । चार जना दाजुभाइ र दुई दिदी बहिनीमध्येकी उनी काँइली हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ३ को प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाइ नियुक्त गरेको छ । २०७४ माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ३ को प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाइ नियुक्त गरेको हो । १९ वर्षे किशोर उमेरमा काठमाडौंका दिनेशप्रसाद कोइरालासँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी उनको दाम्पत्य जीवन भने सफल रहेन । तर सधै न्यायको लडाईमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न उनी सफल रहिन् । महिला हिंसा बिरुद्ध उनका पाइलाहरु अगाडि बढि रहे फलस्वरुप उनी नेपालमा मात्र होइन बिश्वमा नै परिचित बन्न पुगिन् ।
नारी उत्थानका लागि एक योद्धा
माया ठकुरी, वरिष्ठ साहित्यकार
नेपाली साहित्य मार्फत आफुलाई सुपरिचित गराएकी साहित्यकार माया ठकुरी भारतको लखनऊमा सन् १९४६ जुलाई २ मा जन्मिएकी थिइन् । उनले भारतबाट नै शिक्षा आर्जन गरेकी हुन् । शास्त्रीय संगीतमा जुनियर डिप्लोमा गरेकी उनले स्नातक तह सम्मको शिक्षा आर्जन गरेकी छन् । पच्चीस वर्षसम्म शिक्षण पेसामा संलग्न ठकुरी विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक सघंसंस्थासँग पनि गाँसिएकी छन् । ठकुरीका कतिपय रचनाहरू नेपाल र भारतका विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन् । उनका कथाहरू हिन्दी, बङ्गाली, तमिल, जापानी, अङ्ग्रेजी आदि भाषामा अनूदित भएका छन् भने उनका लेखरचनाहरू देशविदेशका पत्रपत्रिकाहरूमा समेत प्रकाशित भइसकेका छन् । उनको प्रथम प्रकाशित रचना चाहिँ ‘बौलाहा’ शीर्षकको कविता हो ।
उनले नारी उत्थानका लागि साहित्यको माध्यमबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । आधुनिक कथा सृजनाका माध्यमबाट नेपाली भाषा र साहित्यलाई देश विदेशमा पु¥याई लोकप्रिय तुल्याए बापत त्रिमूर्ति निकेतनले कथाकार माया ठकुरीलाई नेपाली साहित्य नारी रत्नको सम्मान प्रदान गरेको थियो, उनी यो सम्मान पाउने प्रथम स्रष्टा हुन् । रत्नश्री स्वर्ण पदक, मैनाली कथा पुरस्कार, राष्ट्रिय नागरिक सम्मान, नवनारी सम्मान, प्रतिभा सम्मान, सेलिब्रेटी वुमनहुड, जस्ता थुप्रै सम्मान द्धारा सम्मानित भइसकेकी छन् ठकुरी ।
आर्थिक कठिनका कारण औपचारिक शिक्षा लिन नपाएकी ठकुरीले बाल श्रमिकका रुपमा काम समेत गरेकी थिइन् । बुबाले छोराछोरी र श्रीमतीप्रतिको कुनै पनि दायित्व पुरा नगरेपछि अरुको घरमा भाडा माझ्ने, भात पकाउने, घर सफा गर्ने गर्थिन् । आफ्नो टोलका केटाकेटी पढ्न जाँदा उनलाई पनि पढ्न असाध्यै मन थियो तर स्कुल पठाउन सक्ने आमाको अवस्था थिएन । यसरी दुःख अभावलाई नजिकैबाट महसुस गरेकी उनले साहित्य क्षेत्रबाट कमाउँछु भन्ने सोच राखिनन् बरु समाजलाई केही दिन्छु भन्ने मनस्थितिमा कलम चलाइरहिन् । उनका ७ वटा कथा संग्रह, एउटा गीति संग्रह, थुप्रै बालकथाहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । ठकुरीका अधिकांश कथाहरु वास्तविकतामा आधारित हुन्छन् । ठकुरीको जीवनी युकेको लिभरपुल जोन मोर युनिभर्सिटिमा समाजसास्त्रको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । उनी संगीतकार पनि हुन् भने आफ्नै आवाजमा गीत समेत गाएकी छन् ।
लैंगिक विभेदका कारणले राजनीतिमा आए
पम्फा भुसाल, राजनीतिज्ञ
नेपाली राजनीतिमा साहसिलि नेतृका रुपमा चिनिन्छन् भुसाल । विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भुुसाल पार्टी एकीकरण हुनभन्दा अगाडि सम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेकी थिईन् । राजनीतिमा विभिन्न सिंढी चढ्दै आएकी भुसाल माओवादीको १० वर्षे जनआन्दोलनमा आफ्नो ज्यान समेत दाउमा राखेर समानताको लागि लडिन् । समाज परिवर्तन हुनको लागि विभिन्न किसिमका पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ र त्यसको लागि आँफू स्वयंले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ उनलाई । परिवर्तन प्रत्येक व्याक्तिको सोचमा हुनुपर्छ अनि मात्रै संभव छ यहि बिचार लिएर परिवर्तनका लागि लागिरहेकी योद्धा हुन् उनी । समाज परिर्वतन सम्भव छ तर त्यसका लागि योद्धाको खाँचो रहेको महसुस गरेकी उनलाई तत्कालीन सरकारी पक्षबाट २५ लाख टाउकोको मूल्य समेत तोकिएको थियो । परिवारमा छोरी मात्र जन्माएको कारण समाजले गरेको अनौठो किसिमको व्यवहार र आफ्नो स्वभाव र विचारका कारण कम्युनिष्टमा अर्थात माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिइन् भने जेलनेल सम्पूर्ण कुरा भोगेर सांसद, मन्त्री हुदै पार्टीको प्रवक्ता समेत बन्न सफल भइन् ।
कक्षा ८ मा पढ्दा देखी नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनलाई विद्यालयमा हुने केटा र केटी बिचको विभेदले मन पोलेको थियो । शैक्षिक संस्थामा समेत महिला र पुरुष भनेर छुट्याउन थालियो भने अन्य स्थानमा के होला भन्ने सोच मेरो मनमा आयो उनी, भन्छिन् । यसरी घर देखी काठमाडौँ पढ्न आउने क्रममा काठमाडौँबाट नै युद्धमा प्रवेश गरेकी भुसाल तत्कालीन प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको १९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पहिलो महिला सदस्य रहेकी थिईन् । देशमा जसरी पनि शान्ति स्थापना हुनुपर्छ र विभिन्न जातीय धर्म तथा लिंगका नाममा विरोध तथा होच्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेतृ हुन् उनी । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ललितपुर ३ बाट विजयी संविधानसभा सदस्य पम्फा भुसाल माओवादी केन्द्रीय सदस्य पनि थिइन् र हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्दी्रय सदस्य समेत छिन् । जनमोर्चा नेपालको पहिलो अध्यक्ष बनेकी भुसालले विक्रम सम्बत २०३३ सालदेखि विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति गरेकी हुन् ।
विद्युत उपनामले चिनिने भुसालले २०३७ सालमा चौथो महाधिबेसनको सदस्यता लिएकी हुन् भने २०५१ सालमा माओवादीकी केन्द्रीय सदस्य भइन् । फुर्सदको बेला समाजिक तथा राजनीतिक विषयमा अध्ययन गर्न रुचाउने भुसाल समाजिक असमानता देखेर नै राजनीतिमा लागेको बताउँछिन् । औसत नेपाली भन्दा सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी उनी ग्रामीण समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । पटकपटक गरेर १ वर्ष जेल बसेकी भुसाल फुन्टीबाङ् बैठकपछि माओवादीकी पोलिटब्युरो सदस्य बनेकी थिइन् । अन्तरिम कालमा माओवादी सरकारमा हुँदा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री समेत बनेकी थिइन् भने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनाव पश्चात सांसद समेत रहेकी हुन् । समाजमा महिला र पुरुषको भूमिका समान हुनुपर्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढिरहेकी भुषाल पार्टी बाहिर होस् या भित्र सधै आफ्नो आवाजलाई बु्लन्द पार्दै आएकी छन् ।
सधै नम्बर १मा अन्जु
अन्जु पन्त, गायिका
‘न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई’ बाट चर्चाको शिखर चुम्न सफल भएकी गायिका हुन् अन्जु पन्त । उनी गीतसंगीतमा मात्र होइन अहिले सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । अन्जु पन्त फाउण्डेसन मार्फत उनले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा थुप्रै बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहयोग पु¥याउदै आएकी छन् । थुप्रै हिट गीत दिन सफल पन्त रेडियो नेपालमा भजन रेकर्ड गराएर नेपाली सांगीतिक आकाशमा उदाएकी थिइन् ।
समय समयमा विवादमा समेत आउने गरेकी पन्त लगातार स्रोताको रोजाइमा परिरहिन् भने फिल्म निर्माताहरुले पनि प्ले ब्याक सिगंरको रुपमा सकेसम्म उनलाई नै खोजिरहेका हुन्छन् । लामो समय सम्म एकछत्र राज गर्न सफल अन्जुले गाएको धर्तीको स्वर्ग कहाँ छ भने यहि हो नेपाल, तिम्रो खुशि बन्न सकुँ म तिमीमा हाँसो छर्न सकुँ म, तिम्रा हजार गल्तीलाई माफ गरे मैले, तिम्रो यादले सताउछ तिम्रो मायाले बोलाउछ जस्ता आधुनिक र राष्ट्रिय गीतका साथै पूर्व पश्चिम रेल जस्ता थुप्रै चलचित्रका गीतहरु स्रोताको मनमा बस्न सफल भएका छन् । उनलाई आधुनिक गीत संगीत क्षेत्रमा कोईलीको उपनाम दिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा होस् या बिदेशमा आयोजना हुने अवार्ड समारोहमा आधुनिक गीत, चलचित्रका गीत यी सबैमा उनको नाम कतै छु्टेको हुँदैन । सबै भन्दा बढि अवार्ड पाउने गायिकाका रुपमा पनि उनलाई चिन्न सकिन्छ । एक छोरीकी आमा अन्जु वैवाहिक जीवनमा सफल नरहे पनि सांगीतिक जीवनमा भने अत्यान्तै सफल रहेकी छन् । सबैभन्दा बढी गीत गाउने, सबै भन्दा बढी पुरस्कार पाउने र गीतबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल छिन् उनी । पछिल्लो समय रोयल्टी बढी पाउनेमा पनि उनी पहिलो नम्बरमा नै रहदै आएकी छन् ।
अन्जु नेपाली सांगीतिक क्षेत्रकी बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन् । उनले नेवारी, थारु, भोजपुरी लगायत भाषाहरुमा गीत गाएकी छन् । धेरै श्रोताहरुको मन मष्तिष्कमा बस्न सफल पन्तको यो वर्ष पनि सम्पूर्ण गीतहरुले सफलता प्राप्त गरे । पाँचथरमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएकी पन्तले आँफूलाई सफल बनाउन धेरै संघर्ष भने गरेकी छन् । आफु यहाँसम्म आइपुग्नमा आफ्नी फुपुको ठूलो सहयोग रहेको बताउदै आएकी छन् उनी ।
आत्मबिश्वासले सफल बनेकी संगीता
संगीता कडरिया, व्यवसायी
हामीमा अझै पनि महिलाहरुलाई कम्जोर सोच्ने गलत संस्कार छ । महिला अघि बढ्नको लागि कोटामा नै भर पर्नुपर्छ भन्ने सोचले छाडेको छैन । तर, महिलाहरु अब पुरानो ठाउँमा छैनन् र उनीहरु पुरुषहरुजत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा प्रमाणित पनि भइसकेको छ । यिनै महिला मध्येकी एक हुन संगीता कडरिया । २०४२ सालमा विरगञ्जमा जन्मिएकी कडरियाको बालापन मामाघर रामेछापमा नै बितेको थियो । पढाईमा अब्बल उनी एस.एल.सी.मा जिल्ला टपर भएकी थिईन् । जिद्धी स्वभावकी उनीमा आँफूमा दृढ विश्वास तथा नेतृत्व गर्ने क्षमता छ भन्ने सोच्दै अगाडि बढिन् । सानो उमेरमा नै शिखर सुजका संस्थापक राम कृष्ण प्रसाईसंग विवाह बन्धनमा बाधिएकी उनले सन् २०१० मा सि.ए पास गरेकी हुन् । सि.ए पास भए पछि एनसेलमा काम गरिरहेकी उनलाई आफ्नै संस्थामा केही गर्नु पर्छ भन्ने सोच आयो र उनले शिखर सुजलाई फरक व्यावस्थापनका साथ अगाडि बढाउन थालिन् । २०६८ सालमा देखि आफ्नै व्यवसाय शिखर सुजमा लागिपेरकी उनले छोटो समयमा नै कम्पनीको नाम देशका कुना कन्दरामा गुन्जाउन तथा सबैको रोजाईमा पार्न सफल समेत भईन् ।
एक सामान्य विद्यार्थी देखी जागिरे सम्मको अनुभव बटुलेकी उनी अहिले शिखर सुज कम्पनीका मालिक हुन् भने सफल गृहिणी पनि हुन् । दुइ छोराकी आमा समेत रहेकी संगीतको प्रगती विवाह पछि नै शुरु भयो । विवाह पश्चात महिलालाई अगाडि बढ्न ठूलो समस्या पर्छ भन्ने कुराको अपवाद हुन् संगीता । उनको कामलाई विवाहले रोकेन बरु थप सहयोग पुग्यो । विवाह भएको बेला भर्खरै मात्र आइए पढ्दै थिइन् तर अहिले महिला उद्यमीहरुको लिस्टमा आ
फुलाई अग्रणी स्थानमा राख्न सफल भएकी छन् । उनले आफू कम्पनीमा आए पश्चात कम्पनीको नाम, दाम र इमानमा थप प्रगती गराउन सफल भइन् । श्रीमान्ले गरेको व्यवसायमा उनले थप निरन्तरता दिएकी हुन् । कडरिया शिखर सुजमा आए पछि नै महिलाहरुको रोजगारीको सख्यामा समेत वृद्धि गरिन् । यद्यपी उनी कोटा तथा आरक्षण विरोधी हुन् । उनी एक व्यवसायी मात्र नभएर समाजसेवी पनि हुन् उनले देशमा आइपरेको प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कठिन समयमा आफ्ना तर्फबाट सक्नेजति सहयोग गर्दै आएकी छन् । सामाजिक काम गर्नको लागि पनि पहिला आर्थिक रुपमा आफु बलियो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ उनलाई त्यसैले पनि हरेक समय मिहिनेत गरिरहेकी छन् । आफुलाई सधै सामाजिक, व्यावसायिक र पारिवारिक कामहरुमा एक्टिभ बनाइराखेकी छन् ।
नमुना नेपालदेखि स्टेडियमसम्म
कुन्जना घिमिरे, कलाकार तथा समाजसेवी
नेपाली हाँस्य टेलिशृङ्खला मेरी बास्सैबाट कुन्जना घिमिरेले आफ्नो वास्ताविक नामभन्दा पनि सुन्तली नामले बढी ख्याती कमाएकी छन् । कुन्जना कलाकार मात्र नभएर सफल समाजसेवी समेत हुन् । देशै रोएको बेला हामी हाँसेर बस्न हुदैँन र देश समृद्ध बनाउन हामीले एक थोपा भए पनि पसिना बगाउनै पर्छ भन्ने भावना राख्ने घिमिरे आत्मविश्वासी, साहासी तथा हिम्मतवाली महिला हुन् । कलाकारिता भित्र पनि विशेष गरी हाँस्यव्यग्यको क्षेत्रमा आफ्नो नाम उच्च स्थापित गराएकी छन् उनले ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन मार्फत २०७२ को महाभुकम्प पश्चात बस्ती निर्माणको अभियानमा लागेकी घिमिरे ललितपुरको चापागाँउमा जन्मिएकी हुन् । उनी सानै देखी नृत्य तथा सामाजिक सेवामा व्यस्त रहन्थिन् । सानो उमेरमा बुबा सगै विद्यालयको विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन्थिन् । धेरै मान्छेले उनको नृत्य तथा क्रियाकलाप मन पराउँथे त्यहि बेला देखि उनलाई कलाकार बन्ने रहर जागेर आएको थियो । नमुना नेपाल बनाउने अभियानमा श्रीमान् संगै फिल्डमा उत्रिएर हिंडेकी उनी धेरैको आशाको केन्द्रबिन्दु हुन् । कोमल हृदय भएकी घिमिरे र उनका श्रीमान मिलेर नमुना बस्ती बनाउदैँ गर्दा पैसा पोको पार्ने दाउको लाञ्छना समेत खेप्नु परेको थियो । ‘काग कराउदैँ गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्दै उनी अगाडि बढिरहिन् । कलाकारिता संगसंगै सामाजिक अभियानलाई अंगालेका कुन्जना र धुर्मुसले हाल विभिन्न समुहहरुसंग सहकार्य गरेर सरकारलाई सघाउने गर्दैछन् । ‘देश विकास गर्नको लागि सफा मन भए पुग्छ’ भन्ने लाग्छ उनलाई । आँफूहरुलाई कसैको सहयोग नभए पनि ३ करोड जनताको साथ र सहयोग रहेको छ भन्ने उनी यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्छिन् । देशलाई योगदान दिन पाउदा गर्व पनि महसुस गरेकी छन् कुन्जनाले । रेडियोको चर्चित कार्यक्रम ‘साथीसँग मनका कुरा’मार्फत उनलाई धेरैले चिन्न थालेका थिए भने, दिनप्रतिदिन’मा उनी मुख्य कलाकार बन्ने मौका पाइन् । रेडियो नेपालको प्रवेश र नाटकमा अभिनयकै कारण उनले कलिलै उमेरमा परिपक्व कलाकारको संगत पाइन् जसले उनलाई कलाकारितामा खारिनलाई सहयोग पुग्यो । रेडियोमा बोल्दाबोल्दै उनले टेलिभिजनको पर्दामा समेत देखिने अवसर पाइन् ।
जनस्वास्थ्यसम्बन्धी एउटा सिरियलमार्फत सानो पर्दामा ‘डेब्यु’ गरेकी कुन्जना २०६१ सालबाट ‘मेरी बास्सै’ टेलि चलचित्र मार्फत चर्चामा आएकी हुन् ।
धेरैको नजरमा उनी ‘रियल लाइफ हिरो’ हुन् । एक छोरीकी आमा समेत रहेकी उनले आफ्नो छोरीलाई दिनुपर्ने समय समेत सामाजिक कामहरुमा दिदै आएकी छन् । उनको कलाकारिता यात्रा होस् या सामाजिक अभियान श्रीमान सिताराम कट्टेल धुर्मस सँगै अगाडि बढेको छ । सरसफाई, संयुक्त बस्ती निर्माण, बाढी पिडितलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका धुर्मुस र सुन्तलीले यो साल भने देशलाई अत्ति आवश्यक रहेको क्रिकेट स्टेडियम बनाउने घोषणा संगसंगै कार्य पनि थालनी गसिकेका छन् ।
सवल अनि सक्षम रविना
रविना देशराज, बैंकर
बैंकिङ् क्षेत्रमा आफ्नो छु«ट्टै पहिचान बनाउन सफल रविना देशराज श्रेष्ठ प्रशिक्षार्थीका रुपमा बैंकिङ् क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । स्टान्र्डड चार्टर बैकबाट आफ्नो करियर शुरुवात गरेकी उनी हाल सफल महिला बैंकरको लिस्टमा पर्छिन् । नबिल बैंक हुदैँ मेगा बैंक सम्मको यात्रा सफलता पुर्वक अघि बढाएकी रविना देशराजले बोल्ड महिलाको रुपमा आफ्नो छवि बनाएकी छन्् । महिला पनि आर्थिक क्ष्ोत्रमा उतिकै सवल र सक्षम छन् भन्ने ज्वलन्त उदहारण हुन् रविना ।
सधै सकारात्मक सोच राखेर काम गर्यो भने सफल बन्न सकिन्छ भन्ने रविनाले पिएचडी हाँसिल गरिसकेकी छन् । सेलिब्रेटी बैंकर रविना महिला नै महिलाको बिरोधि हुन्छन् भन्ने कुराको अपवाद पनि हुन् । उनले धेरै भन्दा धेरै महिलाहरुलाई आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गर्न या उद्योग संचालन गर्नको लागि सकेसम्म सहयोग गरिरहेकी हुन्छिन् । उनलाई महिला सफल भएकोमा आनन्द लाग्छ । उनी भन्छिन् हाम्रो समाजले जुन छुट दिएको छ पुरुषलाई त्यो छुट महिलालाई दिन सक्दैन, जुन अवसर पुरुषलाई दिएको छ त्यो अवसर दिनको लागि हिच्कचाउछ । त्यसैले पनि महिलाहरुलाई काम गर्न पुरुषको तुलनामा कैयौ गुणा बढी चुनौती छ । अर्कोकुरा महिलाको कामलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृति अहिले सम्म गएको छैन । महिलाको क्षमतालाई नै अझैपनि स्विकार्न सकिरहेको अवस्था छैन । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अर्वाडबाट सम्मानित भइसकेकी देशराज एक सफल महिला बेंकरको रुपमा परिचित छिन् ।
समाजको असमानतालाइ चुनौती दिदै अगाडि बढ्ने क्रम त्यति सहज थिएन उनलाई । पुरुषवादी सोचले ग्रसित समाजमा एउटी महिलालाई अगाडि बढ्नका लागि प्रसस्तै बाधा अड्चन आउछन् तर उनले त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढिन् । उनी बैकर मात्र होइन युवा वर्गका लागि रोलमोडल हुन्, एक आइडल व्यक्ति हुन् । महिला हिंसाका घटनाहरु बढ्नुमा घरमा आमाहरुले आफ्नो छोराहरुलाई असल संस्कार र शिक्षा दिन नसकेका कारण हो भन्ने लाग्छ उनलाई । अहिले मेघा बैकमा रहेर उनले थुप्रै यस्ता स्किमहरु ल्याउन सफल भएकी छन् जुन स्किम केहि गर्न चाहने, देशमा नै उद्योग स्थापना गर्न चाहने वर्गहरुको लागि प्रभावकारी रहेको छ । महिलाहरुले अन्यााय सहेर होइन डटेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने रविना आफु कहिल्यै पनि काममा अल्छि गर्दिनन् ।
महिला रेस्लरमा एकछत्र राज
भगवती खड्का, प्रथम महिला रेस्लर
रामेछापको मन्थलीमा जन्मिएकी भगवती खड्का ५ फिट ८ इन्च अग्ली छन् भने तौल ८१ किलो । सानैदेखि मोटीघाटी उनी माछामासु र दूधदही निकै खाने गर्छिन् । गाउँभरि सबैले ‘राजेश हमाल’ भनेर तत्कालीन अवस्थामा चिनिएकी उनी नेपालको पहिलो महिला रेस्लर हुन् । विद्यालय जीवनमा एकैचोटी चार जना केटासाथीलाई रामधुलाई गरेकी उनी कुस्तीवाजकै नामले परिचित हुन पुग्लिन् भन्ने चाहिँ कल्पना पनि गरेकी थिईनन् । उनी भन्छिन् ‘त्यतिखेर मलाई काली नै चढे जस्तो भएको थियो ।’ जुन घटनापछि उनले नयाँ नाम पाइन् नयाँ राजेश हमाल ।
खेल क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम नै छ, त्यसमाथि पनि रेस्लिङ्को क्षेत्र भने पछि महिलाहरु डराउने नै भए । बलको हिसाबले पनि महिलाहरु कम्जोर हुन्छन् भन्ने मानसिकतालाई उनको अदम्य साहसले उल्टाएको छ । वर्तमान संघर्षपूर्ण र भविष्य अन्यौलग्रस्त हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण खेलकुद क्षेत्र धेरै कम महिलाको प्राथमिकतामा पर्छ ।
एकैपटकमा २१ वटासम्म अण्डा खाने गर्छिन् भगवती । रेस्लिङको लागि खानपानमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । गायिक बन्ने उनको सोच थियो उनको तर रेस्लिङको अगाडी गायिका बन्ने सपना छायाँमा प¥यो । भगवती कुशल ‘फाइटर’ हुन् भन्ने त परिवारलाई थाहा थियो, तर रेस्लर बन्ने निर्णयमा खासै खुसी थिएनन् । ‘फाइट खेल्नमा पो च्याम्पियन, म रेस्लर नै बन्छु भनेर त कसले पो सोचेका थिए र!’ उनले भनिन्, ‘मलाई यो क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने कोही थिएन । राम्रो, नराम्रो जे भए पनि मैले आफैं रोजेकी हुँ । तर परिवारले मेरो निर्णयमा कहिल्यै बाधा÷विरोध गरेनन् ।’
राष्ट्रिय भारत्तोलन खेलाडी झम्क कटवालसँग तालिम लिएकी उनी यहिँबाट खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । यसबीचमा उनले बक्सिङ्, कराँते र पौडी पनि सिकिन् । गितार, भोकल, फिल्म फाइट र नृत्य पनि सिकिन् । गायिका बन्ने रहर पूरा गर्न‘युनिका’ एल्बम निकालिन् । भगवती रेस्लिङ्मा यही नामले परिचित छिन् । भारत्तोलन छाडेर फिल्मको फाइट र नृत्य सिक्ने क्रममा उनलाई भोजपुरी फिल्म ‘हम है हिरो हिन्दुस्तानी’ खेल्ने प्रस्ताव आयो । त्यसपछि उनी नेपाली फिल्म ‘प्रतिकार’ मा खलनायिका भइन् । अरू पनि केही फिल्म र टेलिसिरियलमा काम गरेकी छन् । फिल्म क्षेत्रमा प्रशंसा कमाए पनि उनको रस बसेन । त्यही बेलाको कुरा हो, फाइट गुरू योगेन्द्र श्रेष्ठले उनलाई भने, ‘तिमीले रेस्लिङ ग¥यौ भने एकदम राम्रो हुन्छ ।’ अहिले महिला रेस्लरको नामले एकछत्र राज गरिरहेकी छन् उनी ।